के तपाई सपनामा डराउनुहुन्छ ? अब यसो गर्नुहोस् - १० भाद्र २०७५, NepalTimes
के तपाई सपनामा डराउनुहुन्छ ? अब यसो गर्नुहोस्
मानिसले कहिलेकाहीँ डरलाग्दो सपना देख्नु सामान्य हो । तर, नियमित रूपमा डरलाग्दो सपना आउन थाल्यो भने अत्यन्त सजग हुन आवश्यक हुन्छ ।नियमित डरलाग्दो सपना देख्नु मानसिक रोगका रूपमा लिनुपर्छ । यसको लागि उपचारको आवश्यकता पर्छ ।
सपनामा अनेक विषय देखिन्छन् भने प्राय सपनाहरु त यादसमेत हुँदैन । निद्राको अवस्थामा मस्तिष्कले वैकल्पिक यथार्थ या काल्पनिकता रचेर प्रदर्शन गर्छ,जुन हामी सपना भन्छौं । मसलेदार फिल्मजस्तै हाम्रो सपनामा पनि एक्सन, इमोसन, रोमान्स, कमेडी आदि देखिने गर्छ । कहिलेकाहीँ त भुतको फिल्मजस्तो पनि सपना देख्ने गर्छौं । यस्ता फरक सपनालाई खराब सपना, दुःस्वप्न या नाइटमेयर भनिन्छ ।
डरलाग्दो सपनाका कारण छिनछिनमा ब्युँझने हुन्छ ।त्यतिवेला धड्कन र श्वाप्रश्वासको गति तीव्र हुने गर्छ,आफुलाई छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ सपना हो कि विपना हो भन्ने कुरा । तर, जब त्यो सपना हो भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ त्यसपछि मानिस बिस्तारै–बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कन थाल्छ । नियमित रूपमा यस्तो सपना देख्न थालेमा पटक–पटक निद्रा छुट्ने गर्छ । यसकै कारण कतिपय सुत्नसमेत डराउँछन् । यस्तो भएमा मानसिक समस्याको रूपमा लिनुपर्छ । यस्तो सपना देखिएको अवस्थामा नाइटमेयर डिसअर्डर या पेरासोम्निया भन्ने गरिन्छ ।
यस्तो डिसअर्डरका कैयौँ कारण भएपनि यसको प्रमुख कारण भनेको जीवनमा घटेका केही गम्भीर घटना हुन् ।कुनै कारणले लगातार तनाव वा डिप्रेसनमा भएको अवस्थामा पनि नियमित रूपमा यस्तो सपना देखिन सक्छ ।नशालु पदार्थको सेवनका कारण पनि नाइटमेयर डिसअर्डर हुन सक्छ । त्यस्तै, यस्ता समस्याको औषधि खाएर छाड्दा पनि नाइटमेयर डिसअर्डर हुन सक्छ ।
स्लिप एम्निया अर्थात् निद्राका वेला श्वासप्रश्वासमा समस्या हुँदा पनि यस्ता समस्याको सिकार हुनुपर्छ । त्यस्तै, लगातार अपर्याप्त निद्राका कारण पनि नाइटमेयर डिसअर्डरको समस्या हुन जान्छ ।फिल्म र उपन्यासले पनि यसमा प्रभाव पार्छ । नियमित हरर फिल्म हेर्ने वा त्यस्तै कथा भएको उपन्यास पढ्ने मानिस पनि यस्तो समस्याबाट ग्रसित हुन सक्छन् ।
डराउने सपनाका कारणले तानाव मात्र होइन, डिप्रेसन नै हुन सक्छ । त्यसैले यसको समयमै उपचार गर्न जरुरी हुन्छ । उपचारका क्रममा डाक्टरले वैकल्पिक औषधि पनि उपलब्ध गराउन सक्छ ।नशालु पदार्थका कारण यस्तो समस्या भएको हो भने यस्तो लत तत्काल छुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।